कपिलवस्तुः समानुपातिकमा ६ महिला |
कपिलवस्तुः समानुपातिकमा ६ महिला
प्रकाशित मिति :2018-01-07 11:03:24
कपिलवस्तु । मंसिर १० र २१ मा सम्पन्न प्रदेशसभा चुनावको समानुपातिकतर्फको अन्तिम मत परिणाम आएको केही समय भइसकेको छ । निर्वाचन आयोगद्वारा दिईएको निर्देशन अनुरुप राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक तर्फको नाम टुंगो लगाई निर्वाचन आयोगमा बुझाईसकेका छन् । समानुपातिकतर्फ कपिलवस्तु जिल्लाबाट एमालेले १ जना, का‌ग्रेसले ३ जना, माओवादीले १ जना र संघिय समाजवादी फोरमले १ जना गरी ६ जनाको नाम निर्वाचन आयोगमा पठाईसकेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा रहेर प्रदेशसभामा कपिलवस्तुबाट समानुपातिकमा पर्न सफल महिला सांसदहरूको विगतको राजनीतिक पृष्ठभूमी र उनीहरूले पार्टीमा गरेको योगदानका बारेमा महिला खबरले गरेको कुराकानी छ ।
फौजिया नसिम, एमाले
नेकपा एमालेले टुंगो लगाएका ५ नं. प्रदेशका १३ जना समानुपातिक सांसद मध्येमा कपिलवस्तुबाट फौजिया नसिम पर्न सफल भएकी छन् । एमालेको स्थायी कमिटीले कपिलवस्तुबाट उनको मात्र नाम चयन गरेको छ । १२ जना अन्य जिल्लाबाट छन् । द्वन्द्वकालमा उनीसहितको परिवारलाई माओवादीले बिस्थापित गरेको थियो । माओवादीबाट बिस्थापित भएपछि श्रीमान नसिम अहमद पहिले प्रतिकार समूह र पछि मधेसबादी भूमिगत पार्टीमा लागि माओवादीविरुद्ध प्रतिकार गर्दै आउँदा राजनैतिक संलग्नता बढेको हो । २०७० सालदेखि एमालेको सम्पर्कमा रहँदै आएपनि २०७२ को महाभूकम्पपछि मात्र उनी र श्रीमान समेत एमालेमा प्रबेश गरेका हुन् । ४४ वर्षीया उनले ११ कक्षासम्म अध्ययन गरेकी छन् ।
मायादेबी गाउँपालिकाको प्रमुखमा लडेर पराजित फौजिया हारेर पनि विधायक बन्ने लक्की महिला हुन् । अखिल नेपाल महिला संघको जिल्ला कमिटी सदस्य रहेर १-२ वर्ष राजनीति गरेसँगै उनलाई मुस्लिम समावेशी कोटाबाट एमालेले प्रदेश सांसद बनाएको हो । पार्टीमा खासै त्याग र योगदान विगतमा नरहेको स्वीकार्दै उनले अब छोटो अवधीमा धेरैकाम गर्ने प्रतिवद्धता गरिन् ।
करिब १५ वर्षदेखि कांग्रेसमा रहेर क्रियाशील राजनीति गर्दै आएकी कपिलवस्तु नगरपालिका वार्ड नं. १ निवासी रिना बिक समानुपातिक तर्फबाट सांसद बन्न सफल भएकी छन् । घर परिवारका सम्पूर्ण सदस्य कांग्रेस भएकाले उनी कांग्रेसी राजनीतिको छत्रछायामा हुर्किइन् । उमेरले ४० लागेकी उनले स्नातक तहको अध्ययन गरेकी छन् । मध्यम बर्गिय परिवारमा हुर्किएकी उनी घरपरिवारको एकदमै सहयोग रहेको बताउँछिन् । अध्ययनको क्रममा कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी संघबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेकी बिक हाल नेपाल महिला संघ र दलित संघको जिल्ला सचिव छन् । बिकले पार्टीमा दिएको योगदान महत्वपूर्ण रहेको कांग्रेस जिल्ला नेता शुरेश शर्माको भनाइ छ ।
रुन्धाबती दुबे, नेपाली कांग्रेस
कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद बन्न सफल रुन्धाबती दुबे कांग्रेस जिल्ला सचिव सुुरेशप्रसाद शर्माकी श्रीमती हुन् ।
२०४६ साल अघिदेखि नै श्रीमानले कांग्रेसमा रहेर सक्रिय राजनीति गर्दै आउदा उनमा राजनैतिक चेतना अभिबृद्धि भएको थियो । श्रीमानको प्रेरणाका कारण पार्टीको क्रियाशील सदस्य भइन् । उमेरले ५३ लागेकी दुबेले हाई स्कुलसम्मको अध्ययन गरेकी छन् । मध्यम बर्गीय परिवारकी दुबे पार्टीले दिएको जिम्मेवारीबाट पछि नहट्दै पार्टीमा योगदान पुर्याएको बताउछिन् । पार्टीमा श्रीमानले गरेको राजनैतिक योगदानको प्रतिफल स्वरुप श्रीमती सांसद बनेको घटनासँग सामान्यतया मेल खाएपनि कांग्रेसभित्र मधेसी महिला भएर पनि राजनैतिक रुपमा गरेको योगदानको कदर स्वरुप पार्टीले आफूलाई सांसद बनाएको उनको भनाइ छ ।
माला गोतामे, नेपाली कांग्रेस
कांग्रेस समानुपातिकमा परेकी माला गोतामे शहिद परिवारको सदस्य हुन् । लोकतन्त्रको स्थापना भएपछि अज्ञात समूहले उनका श्रीमान पूर्ण विकको हत्या गरेका थिए । श्रीमान गुमाएकी उनले संघर्ष गर्दै कांग्रेसमा रहेर राजनीतिमा सक्रिय भइन् । उनको पारिवारिक अवस्था सामान्य छ । बुद्धभूमी नगरपालिका निवासी उनी दलित संघको केन्द्रिय सदस्य समेत हुन् । ४७ वर्षीया उनले उच्च माबिसम्मको अध्ययन गरेकी छन् । लामो समयदेखि राजनीतिमा सक्रिय रहेर शिक्षण पेसालाई निरन्तरता दिदै आएकी उनले आगामी दिनमा पनि राजनीतिमा क्रियाशील भएर देश र जनताका लागि काम गर्ने योजना बनाएकी छन् ।
शुष्मा यादब, माओवादी केन्द्र
प्रतिनिधी र प्रदेशसभा चुनावको डेढ महिना अघिमात्र माओवादी केन्द्रमा प्रबेश गरेकी शुष्मा यादब समानुपातिक तर्फबाट सांसद बन्न सफल भइन् । १६ वर्षको उमेरमा एमालेमा प्रबेश गरेकी शुष्मा २८ वर्षको उमेरमै माओवादीवाट बिधायक बनेकी हुन् । बिद्यार्थी जीवनदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय उनी हाल स्नातक तहमा अध्ययनरत छन् । एसएलसीपछि क्याम्पस तर्फको अध्ययनलाई निरन्तरता दिँदै उनी केही वर्षदेखि नीजि शिक्षण संस्थामा शिक्षण पेसा अंगाल्दै आएकी छन् । उनका श्रीमान काशीराम यादव माओवादीमा जनयुद्धका बेला विशेष योगदान गर्दै लडाकु दस्तामा क्रियाशील थिए । नयाँ शक्तिबाट माओवादी केन्द्रमा फर्केपछि शुष्माको पनि पृष्ठभूमी राजनीति नै भएकाले सानो उमेरमै समानुपातिक सांसदमा पर्न सफल भएकी हुन् ।
गिताकुमारी श्रीवास्तब, संघिय फोरम
विगतमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा रहेर राजनीति गर्दै आएकी गिता कुमारी श्रीवास्तब २०६८ पछि संघिय समाजवादी फोरममा प्रबेश गरेकी हुन् । आफूलाई मध्यम बर्गीय परिवारको भन्न रुचाउने उनले स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाका रुपमा काम पनि गरिन् । उनी फोरमको केन्द्रिय महिला सदस्य र तराई थारुहट प्रदेशको प्रदेश सदस्य समेत भइन् । ५० वर्षीया उनले हाई स्कुलसम्मको अध्ययन गरेकी छन् । फोरमको तर्फबाट ५ नं. प्रदेशबाट २ जना सांसद बनेका छन् । अर्को एक जना दाङ्बाट लक्ष्मी चौधरी परेकी हुन् ।